कस्तो देश हो अमेरिका ? - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
कस्तो देश हो अमेरिका ?
आरएल श्रमजीवी, न्यूयोर्कबाट
एयरपोर्टबाट स्थानीय मेट्रो ट्रेन चढेर न्युयोर्क छिरेदेखि नै मैले अमेरिकी जीवनलाई छाम्ने प्रयास गरें । मेट्रोभरि गोरा मान्छे होलान् भन्ने मेरो अनुमान असत्य भएपछि मैले गरेको पूर्व अनुमान फेल भयो । म अलमलिएँ । कोही मंगोलियन, कोही आर्य जस्तै देखिने होचा, अग्ला, मोटा, काला नगन्य संख्यामा कोही गोरा मान्छे देखेपछि मलाई अमेरिका हो जस्तो लागेन । मान्छेको भिड, हल्ला देख्दा कतै म इन्डियाको रेल यात्रा पो गर्दैछु कि जस्तो लाग्थ्यो यथार्थमा म न्यूयोर्कको मेट्रोमा हुइँकिएको थिएँ । अमेरिका त्यही देश हो जुन देश ५ सय वर्ष अघि सामुन्द्रिक यात्राको क्रममा क्रिस्टोफर कोलम्बस (जन्म १४५१, मृत्यु २० मई १५०६ युरोपियन नागरिक) एटलान्टिक ओसनको काबो दि रोक्का युरोपको अन्तिम भूभाग अर्थात् जिरो पोइण्ट (हाल पोर्चुगलमा पर्छ पहिला स्पेनको थियो) त्यहीबाट हराएका थिए । उत्तरतर्फको यात्रा गर्दा गर्दा कयौं दिनपछि क्रिस्टोफर कोलम्बस एक्कै पल्ट अमेरिका पुगेका थिए । यद्यपि अमेरिका पुग्ने उनी पहिलो यूरोपियन नागारिक थिएनन् तर कोलम्बसले नै पूरा यूरोपवासीलाई युरोपभन्दा पर अमेरिका भन्ने देश छ भनेर प्रचार गरे !
अमेरिका पत्ता लगाएको श्रेय क्रिस्टोफर कोलम्बसलाई जान्छ । उनले नै अमेरिकालाई बाहिरी दुनियाँमा चिनाए । कोलम्बस स्पेनी नागरिक हुन् । अमेरिकाका मूल जाति रेड इण्डियन जस्ता देखिने यहाँका आदिवासीभन्दा युरोपियन गोराहरु बढी भएको हामीले इतिहासमा पढेका छौं । अहिलेको अमेरिका पहिला स्पेनले शासन गरेको थियो । स्पेनकी रानी इसाबेलाले कोलम्बसलाई खर्च दिएर चार पल्ट अमेरिकाको यात्रा तय गरी उनले नै हिस्पानिओला द्वीपमा बस्ती बसालेको इतिहासमा उल्लेख छ । इतिहासदेखि नै यहाँ स्पेनिसको बाहुल्यता छ । कयौं वर्षसम्म अमेरिका स्पेनी उपनिवेशवाद शिकार भएको थियो । पहिला यो दुनियाँमा यूरोपियन मुलुकबाटै उपनिवेशवादको प्रक्रिया शुरु भएको हो । पहिला युरोपियन पछि अफ्रिका लगायत सबै महादेशबाट इतिहासदेखि नै अमेरिका र अष्ट्रेलिया आप्रवासीको महादेश हो भन्दा फरक पर्दैन । ४ जुलाई, १७७६ मा अमेरिकाको स्वतन्त्रतासँगै यो देशको आधुनिक इतिहास शुरु हुन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए), छोटकरीमा संयुक्त राज्य (यू एस) वा अमेरिका भनिन्छ । उत्तरी अमेरिका महादेशस्थित यो देश ५० राज्यमा विभाजित, संघीय प्रणालीमा चलेको छ उत्तर अमेरिकामा अमेरिकाबाहेक क्यानाडा र मेक्सिको देश छन् । ३८ लाख वर्ग किलोमिटर ३४४ करोड बढी जनसंख्या रहेको अमेरिका चीन र भारतपछि जनसंख्यामा तेस्रो मुलुक हो भने चीन भारत र रुसपछि क्षेत्रफलमा चौथो ठूलो देश हो । अंग्रेजी भाषा र डलरका कारण यो देश संसारकै धुरी हो भन्दा फरक नपर्ला । विभिन्न राष्ट्रका सबै जाति र भाषा रहेको यो संसारकै एक मात्र बहुसांस्कृतिक राष्ट्र हो । अमेरिकाको राजधानी वासिङ्टन, डीसी हो भने यो देशको ठूलो शहर न्यूयोर्क हो । अन्य मुख्य शहरहरुमा लास एन्जलस, सिकागो, डालस, सान फ्रासिस्को, बोस्टन, फिलाडेल्फिया, हुस्टन, अटलान्टा र मियामी रहेका छन् । यो देशको भूगोल, जलवायु र वन्यजन्तु विविध प्रकारका छन् ।
शीत युद्धको समाप्तिपछि आजका दिनसम्म आइपुग्दा संयुक्त राज्य अमेरिका एक सम्पन्नशाली र शक्तिशाली विकसित देश हो । सन् २०१८ को तथ्याङ्कअनुसार दुनियाँभरको अर्थव्यवस्थाको १६ प्रतिशत भाग अमेरिकाको छ । अमेरिकाकै टक्करमा चीन उदाउँदो अवस्थामा भएको अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् । संसारमै क्रयशक्तिका हिसाबले अग्रणी मुलुक अमेरिका हो । त्यही देश हो, जहाँ विश्वको कुल सम्पत्तिको लगभग ४० प्रतिशत हिस्सा छ । औसत मजदुरी, मानव विकास, प्रतिव्यक्ति जीडीपीको हिसाबमा पनि यो विश्वकै अगाडि छ र संयुक्त राज्य अमेरिका दुनियाँभरिकै अग्रणी आर्थिक र सैन्य शक्ति छ । राजनीतिक र सांस्कृतिक हिसाबले संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रभाव छ । वैज्ञानिक खोज र अनुसन्धानमा यो नै संसारको प्रमुख राष्ट्र मात्र होइन एक मात्र शक्तिशाली मुलुक हो । त्यसैले त जो–कोही अमेरिका आउन मरिहत्य गर्छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए)को नाम संसारभरका मान्छेलाई थाहा छ । घुम्नलाई होस् वा बसोवास गर्न विश्वभरिका मान्छेहरुको अन्तिम गन्तव्य पनि अमेरिका हो । अमेरिका भनेपछि किशोर र वयस्कहरु त लालयित हुन्छन नै ५० वर्ष नाघेका अधबैसे पनि सन्तानको भविष्य भन्दै अमेरिका भासिएको मैले देखें । अमेरिका छिरेपछि जुनसुकै उपाय अपनाएर जसरी पनि ग्रीनकार्ड (आवासीय भिसा) लिन्छन् । अमेरिकामा युरोपका सम्पन्न मुलुकहरु स्विजरल्याण्ड, नेदरल्याण्ड्स, बेल्जियम, जर्मनी देशमा जस्तो डिपोर्ट हँुदैन । जुनसुकै देशको जोसुकै व्यक्ति अमेरिका पसेपछि पस्यो पस्यो । अमेरिकामा रहेर जस्तै कठिन संघर्ष गर्नु परे पनि सबैको अनुहारमा चमकता देख्न पाइन्छ । यति कि अमेरिकाको कानुनले अवैध ठहरिएका व्यक्तिहरु जेलमा पुग्दा पनि आगामी दिन सुनौला हुन्छन् भनेर उनीहरु निराश नभएको जस्तै विपतलाई पनि सामना गरेको मेरा यी दुई आँखाले देख्न पायो ।